Shaaciyey faahfaahinta koowaad ee Samsung Galaxy Note 8 | War gadget
Shaaciyey faahfaahinta koowaad ee Samsung Galaxy Note 8
Haddii sanadkii hore aad ugu dambayntii dooneysay inaad cusboonaysiiso Xusuus-qorkaagii hore, sannadkan waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad sugto maxaa yeelay, mar baa la xaqiijiyay in shirkadda Koonfurta Kuuriya Samsung ayaa soo saareysa Galaxy Note 8 cusub iyo inuu durbaba ka shaqeynayo si buuxda, hadda faahfaahino cusub oo ku saabsan terminaalka soo socda ayaa naloo caddeeyay.
Macluumaadku wuxuu nooga imaanayaa "leaker" caan ah Evan Blass kaasoo ka faa'iideystey afhayeenka weyn ee ah astaantiisa barta Twitter si uu ugu dhawaaqo qaab aan rasmi ahayn Samsung Galaxy Note 8 ayaa imaan doonta tad dambe, bisha Sebtember, iyo qiimo dhan ilaa kun euro. Laakiin iska aamus, sida uu yidhi middaas, "weli ha aadin, weli wax badan baa jira."
1 Ku bood Galaxy Note 8
2 Waxa aan ka ogaanno Galaxy Note 8 ee soo socda
Ku bood Galaxy Note 8
Sanadkii la soo dhaafay, shirkadda weyn ee tikniyoolajiyadda Samsung ayaa go'aansatay inay ka booddo lambarka Olombikada iyagoo bilaabay bartamaha xagaaga Galaxy Note 7. Waxayna u muuqataa inay tahay inay ku heshay xawaare aad u badan boodboodkaas maxaa yeelay fashilku wuxuu ahaa mid baaxad weyn oo taariikhi ah.
Waxyar ka dib markii laga bilaabay dalal ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Kuuriyada Koofureed, waddankeeda, dadka isticmaala qaarkood waxay billaabeen inay soo sheegaan shisheeyaha kiisaska qaraxyada iyo dabka ka kaca taas oo ka dhigeysa in terminalku uu ku gubtay olol, wuxuu sameeyay buuq ka kooban qaybo, iyo in, mararka qaar, ay saameeyeen guryaha kale: gawaarida, guryaha ... Kiisaska ayaa batay oo shirkaddu waxay ku dhawaaqday joojinta iyo ka saarista boosteejooyinka, taas oo lagu beddeli doono kuwa cusub oo aan dhib lahayn. Yidhi oo la qabtay si kastaba ha noqotee, horeyba waa loo ogaa in qulqulatadu aysan fiicnayn oo shixnadda labaad dhibaatadu way sii jirtaa. Mas'uuliyiinta ayaa shaqo bilaabay, Galaxy Note 7 xitaa waa laga mamnuucay duulimaadyada ganacsiga sababo la xiriira halista ay u leedahay nabadgelyada dadweynaha. Ugu dambeyntii, Samsung waxaa lagu qasbay inay joojiso soo saarkeeda iyo suuqgeynteeda markii labaad, hadda, si joogto ah.
Samsung Galaxy Note 7 wuu dhintay, laakiin ma ahan taxanaha Galaxy Note. Dhinac, bilowgii sanadkan waxaa la xaqiijiyay in Samsung waxay ka bilaabi doontaa qaybo ka mid ah "dib loo cusbooneysiiyay" Galaxy Note 7 dalal ay ka mid yihiin Kuuriyada Koofureed qiimo ka hooseeya qiyaastii 25%, waa wax, habka, ayaa dhici doona. Ujeeddadu waxay ahayd laba waji: in gacan laga geysto dayactirka deegaanka iyadoo la siidaayo qeybaha la keydiyay iyadoo aan si dhab ah loo ogeyn waxa laga yeelayo, iyo in dib loo soo celiyo qeyb ka mid ah maalgashigii lagu sameeyay terminaalkii fashilmay.
Iyo meel kale, Samsung waxay bilowday inay ka shaqeyso dhaxalka dabiiciga ah ee "walxaha qarxa", Galaxy Note 8,Kuwaas oo aan hadda ognahay faahfaahin dheeri ah oo dheeri ah oo ay ugu mahadcelinayaan sifeynta uu sameeyay Evan Blass iyada oo loo marayo boggiisa Twitter @evleaks.
Waxa aan ka ogaanno Galaxy Note 8 ee soo socda
Sida isticmaaleyaal badani horeyba u maleyn lahaayeen, Galaxy Note 8 ee soo socda ayaa dhaxli doona qaar ka mid ah astaamaha aan horeyba ugu aragnay guusha Galaxy S8 iyo Galaxy S8 Plus. Waxa ugu cajiibka badan ayaa noqon doona korsashada fikraddaas shaashadda "Infinity Display", waa wax weyn guddi labajibaaran guddiga AMOLED dhinacyadeeda oo lahaa cabir ka mid ah 6,3 inji iyo 18,5: 9 saamiga dhinaca.
Si kastaba ha noqotee, Galaxy Note 8 wuxuu noqon doonaa, illaa iyo hadda, terminal leh aqoonsi u gaar ah oo sidaas darteed, inkasta oo ay u egtahay S8 iyo S8 Plus, waxay sidoo kale isku dayi doontaa inay ka fogaato iyaga, oo kaliya ma aha iyada oo la isku daro kuwa horay u caan baxay. S Pen, laakiin sidoo kale iyada oo loo marayo qeexitaannada sida a laba kamaradood oo leh 12 megopixel sonors iyo xasilinta indhaha. Iyaga agtooda waxaa noqon doona birqiga iyo midigtiisa, shidmalaha sawirka faraha. Tani waxay noqon lahayd habka lagu dhammeeyo "muranka" ay sababtay meesha uu ku sugan yahay akhristaha faraha ee taxanaha S8.
Gudaha gudahiisa, waxaan ka heli doonnaa terminal aad u awood badan oo leh waxqabad aad u wanaagsan iyada oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah in ay iyaga dhex geli doonto Qualcomm Snapdragon 835 ama processor Exynos 8895 (waxay kuxirantahay suuqa aan kujirno), in kastoo Xusuusta RAM waxaa lagu kordhinayaa 6 GB. Oo intaas oo dhan waxaa taageeray a 3.300 mAh baytariga.
Waxay sidoo kale ku dari doontaa kaaliyaha dalxiiska bixby oo la bilaabayo waxay dhici doontaa waxyar ka dib sida la filan karo, mararka qaar bisha Sebtember, iyadoo ujeedka ugu weyn ee istaagga moodeelka cusub ee iPhone-ka, kaas oo sidoo kale lagu sii deyn doono taariikhahaas, waana sababta qiimaheedu wuxuu noqon lahaa 999 euro, sidaas awgeed iyaga ayaa siinaya nuxurka weyn ee qalabka caymiska.
Dabcan, midkoodna rasmi ma ahan, hase yeeshe, diiwaanka guusha ee Blass wuxuu nagu martiqaaday inaan xogtiisa si dhab ah uga qaadno.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Shaaciyey faahfaahinta koowaad ee Samsung Galaxy Note 8
TOP heshiisyada usbuuca ee Amazon - Juunyo 2017
Ka faa'iideyso iibka uumiga iyo talooyinka ha u dhiman isku dayga